Ukubonisa ii-5 eziqhelekileyo zeNkcazo zeNkcazo-ITS Tech School
5 UCanzibe 2017
Ukubonisa i-5 Common Programming Myths
Njengoko isofthiwe ishintshe imisebenzi kumashishini ahlukeneyo, iinkqubo zekhomputha zifunwa kakhulu kunanoma nayiphi na kwimemori yakutshanje. Kwimeko apho umqhubi enezakhono ezithile, ukufumanisa imisebenzi eyimali enkqubelayo inokuba yinto enzima kakhulu kunamashishini amaninzi ahlukeneyo, oku kuthetha ukuba banako ukulandelelanisa ukuhlawulwa kwentlawulo kunye neenzuzo.
Nangona kunjalo, njengenzuzo njengemisebenzi yokwenza imisebenzi, kusekho ukungathandabuzeki ngokungena kwimilo yeprogram ngenxa yokudibana rhoqo nge shishini. Nazi ezintlanu ezisisiseko malunga neprogram kunye nokuba kutheni zingekho ngqo.
Iingoma #1: Abaqulunqi bonke badlala kwaye akukho msebenzi
Amabakala eetafula ze-ping pong kunye namagumbi okudlala kwimibutho ye-tech inike abaphuhlisi ukuba baqaphele. Inyaniso iya kuthiwa, abaprogram bavame ukusebenzisa ii-oyile zobusuku bobusuku, beza kulungiswa kwizakhono ezingenasiphelo.
Abaphuhlisi abaninzi beenkqubo zesoftware basebenze iiyure eziguquguqukayo, kungakhathaliseki ukuba basebenza ekhaya okanye bangene eofisini yonke imihla, ngaphandle kokuba oku akuthethi ukuba bachithe iintsuku zabo bedlala. Bahlala bebenza ngokuhlwa kunye nokuphela kweveki, ngokukodwa xa bephakathi kwendawo enkulu.
Inkolelo #2: Abaqulunqi bonke Bonke Umsebenzi no-No Play
Abaqulunqo basebenze nzima-nangona kunjalo kumphathi wesigqeba osebenza kakuhle, akudingeki ukuba badlule iveki yomsebenzi weeyure ze-40 ngeyure. Kubalulekile ukuba abaphuhlisi beprogram bekhutshulwa kule datha xa befuna umsebenzi. Ingaba ishishini litshintshela kubathengi abathatha inxaxheba kwintambo yokwandisa phakathi kwexesha elichaphazelekayo, okanye ngaba ngaba balindeleke ukuba babeke iiyure ezingaphezulu?
Ngenxa yokuthandwa kwabafundi abanobuchule, abakhuthazelayo, abaphuhlisi abangenawo umgangatho ogqithiseleyo njengomgaqo banokwenza isibini siphumelele kwaye sifumane isiqhelo somsebenzi ophezulu.
Inkolelo #3: Abaqulunqi bangabasebenzi
Usenokuba uvile ukuba abaprogram banabantu abaye bacingela abantu abafaka iiyure zihlala kunye nekhompyutheni kunye nengxowa yeCheetos. Yiba njalo, ngokunjalo, abaprogram banamhlanje baxhamla ngokubambisana kunye nabo basebenzisana nabo, bandise iintloko, kunye nabaxhasi bokugqibela. Le ndlela yindlela abaqokelela ngayo idatha malunga nesofthiwe esimele ifakwe.
Abameli abaninzi bayichitha inxalenye enkulu yemihla yokusebenza edibanisa ngeekhompyutha zabo kunye neendlela ezahlukeneyo zobuchwepheshe. Ngale ndlela, abaprogram abanenkani kakhulu.
Inkolelo #4: Isoftware Ngaba yonke imisebenzi
Ewe, kukho ezininzi izixhobo ezenza ubomi beprogram bube lula. Esikhundleni sokuphuhlisa isicelo ngasinye ukususela ekuqaleni, abathuthukisi be-savvy bayaqonda ukuba banokuxhomekeka kwikhowudi ekhona eyenza inxalenye yomsebenzi kubo. Le khowudi ivela kwiilayibrari eziye zazanywa ngoku, kunye nezibugs zenziwa ngaphambi kokuba abaprogram babenzela i-application yabo.
Ixesha elininzi njengoko la mathala eencwadi angayinceda, abaprogram bafanele babe nekhono lokutshintsha ikhowudi ukuze bahambelane nomnye wabo wesizinda sobubele, esingafuna ixesha elininzi lokukwazi ukukhuphela kwi-coding ukusuka ekuqaleni.
Inkolelo # 5: Abaqulunqi beeGenesis Genius
Ngokuqinisekileyo, uluntu olungabonakaliyo njengabalingisi beemathematika. Enyanisweni, ukuqamba ikhowudi kuye kwangekho into eyenzayo malunga neeklasi ezithatha isikolo esikolweni esiphakamileyo kunye nesikolo. Yiba nokuba kunjalo, izibalo ezisezantsi ziyakwazi ukusekwa ngokumangalisayo ukuqamba ikhowudi.
Yiba njengoko kunjalo, ininzi yamathala eencwadi kunye neepomodula zamakhowudi zisebenzisa ukusetyenziswa kwezicelo namhlanje, izibalo ezinokugqithiswa zingagqitywa ngokufanelekileyo ngempumelelo. Kungakhathaliseki ukuba kungenzeka ukuba awuziboni njengobuninzi bemvelo, mhlawumbi ufumene iimpawu ezixhomekeke kumatriki kwaye oko kungaba ngumqondiso ohloniphekileyo wokuba iprogram ngulo msebenzi.
Abafundi bangaba yiinkcenkceshe zonyanzeliso kuzo zonke iinkampani. Kukho nawuphi na, nabo banemisebenzi eyanelisayo ebanika ixesha elide lokunciphisa, nabo. Xa bezakhono zabo kunye nokwakha i-resume emangalisayo, banako ukubiza amazinga ahlawulayo kunye nama-livens enza ukuba yonke imisebenzi ekhutheleyo ifanelekileyo, nangona kukho yonke ingxaki.
Inquisitive about programming? Kutheni ungakhethi ulwimi lwenkqubo ukuze ufunde kuqala!
Izatifikethi ezixabisekileyo kakhulu kwiNkcazo yeNkcazo